ओलीको पेलेरै जाने रणनीति
काठमाडौं, २८ असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीनजना आफू निकटस्थलाई मन्त्री बनाएका छन् । पार्टीभित्र अर्को पक्षका कुनै नयाँ व्यक्ति मन्त्री नबन्नुले मतभेद प्रष्ट
सरकारले मान्दैन सर्वोच्चको आदेश
असोज २८, काठमाण्डौ । न्यायपालिका र कार्यपालिका जनताको आशाको केन्द्र हुन् । तर नेपालमा यि दुवै संस्था जनताप्रति उत्तरदायी बन्न सकेका छैनन् । यद्यपी न्यायपालिकाले जनताको हितमा सरकारलाई विभिन्न सन्दर्भमा
रक्षा मन्त्रालय माधव नेपालको भागमा!, कसले पाउला जिम्मेवारी ?
काठमाडौं, २८ असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज साँझ मन्त्रिपरिषद हेरफेर गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी महासचिव विष्णु प्रसाद पौडेललाई दिईएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा कृष्णगोपाल
प्रधानमन्त्रीद्धारा मन्त्रिपरिषद हेरफेर : विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री (कसलाई के जिम्मेवारी )
काठमाडौं, २८ असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद पूनर्गठन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले रिक्त रहेको अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी महासचिव विष्णु पौडेललाई दिएका हुन् । कृष्णगोपाल श्रेष्ठलाई शहरी विकास
नेकपामा बल्झियो विवाद, अब के होला ?
काठमाडौं, २८ असोज । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विवाद फेरि बल्झिएको छ । पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको विवाद समाधान भइसकेको भनिएपनि कर्णालीमा पुगेर नयाँ विवाद
२४ घन्टामा १२ जना कोरोना संक्रमितको निधन
काठमाडौं, २८ असोज । पछिल्लो २४ घन्टामा देशभर थप १२ जनाको कोरोना संक्रमणबाट निधन भएको छ । योसँगै कोरोना संक्रमणबाट निधन हुनेको सख्या ६ सय ७५ पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको
काठमाडौं, २८ असोज । काठमाडौं उपत्यकामा आज एकै दिन १४ सय ३ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । देशभर २६ सय ३८ जनामा कोरोना पुष्टि भएकोमा काठमाडौमा मात्रै १४ सय
आवास सम्बन्धी ऐन : प्रमाणीकरण भएको दुई वर्षमा पनि बनेन नियमावली
काठमाडौं, २८ असोज । संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनाइएको आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेको दुई वर्षसम्म पनि नियमावली बन्न सकेको छैन । संघीय संसद्का दुवै सदनबाट
वामदेवविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाई दशैंपछि मात्र हुने
काठमाडौं, २८ असोज । वामदेव गौतमविरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाई फेरि स्थगित भएको छ । आज सुनुवाई हुने तय भएकोमा स्थगित भएको हो । सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार मुद्दाको सुनुवाई दशैंपछि
काठमाडौँ, असोज २८ गते । सरकारले सिट क्षमताको आधा मात्र यात्रु राख्ने प्रावधानलाई यथावत् राख्दै सार्वजनिक यातायातको भाडा भने घटाएको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले बन्दाबन्दीपछि वृद्धि गरिएको ५० प्रतिशत भाडा
एन्टिजेन बेस्ड टेस्ट मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाले मात्र गर्न पाउनेः स्वास्थ्य मन्त्रालय
काठमाडौं, २७ असोज । कोरोना संक्रमण परीक्षणको लागि गरिने एन्टिजेन बेस्ड टेस्ट जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले मान्यता दिएको ल्याबले मात्र गर्न पाउने स्वास्थ्य मन्त्रालले निर्णय गरेको छ । हाललाई टेस्ट गरेको शुल्क
काठमाडौं, २७ असोज । नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आज थप १८ जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । योसँगै कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा मृत्यु हुनेको सख्या ६६३ पुगेको हो ।